बोर्डका अध्यक्षले अघि सारे यस्तो योजना, शेयर कारोबारले फड्को मार्ला ? – Insurance Khabar
बोर्डका अध्यक्षले अघि सारे यस्तो योजना, शेयर कारोबारले फड्को मार्ला ?
प्रकाशित मिति : २५ पुष २०७६, शुक्रबार १२:३०
काठमाडौँँ । धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष्य भिष्मराज ढुङ्गानाले पूँजी बजारको विकासका लागि सात बुँदे योजना अघि सार्दै प्रविधि र लगानीलाई जोड्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका ढुंगानाले आजै शपथग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दैछन् । ढुङ्गानाले पूँजी बजार विकासका लागि पूँजी बजारको स्थिरतालाई जोड दिएका छन् । पूँजी बजारमा स्थिरता कायम गर्न सके लगानीकर्ताहरुलाई लाभ मिल्ने उनको बुझाई छ ।
आफ्नो कार्यकालमा दोस्रो प्राथमिकता स्वरुप व्यावसायिकता विकास गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै तेस्रो योजनामा पूँजी बजारको दायरा बढाउने योजनामा अध्यक्ष ढुंगाना छन् । हालको पुँजि बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरु थप गरी धेरै लगानीकर्ता सहभागी गराउने र त्यसले बजार नियन्त्रण भन्दा अझै खुल्ला हुने उनको विश्वास छ ।
आजैबाट कार्यभार सम्हाल्दै गरेका ढुंगानाले पूँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाएर कारोबार सरल र आम सहभागिताको वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । अर्कोतर्फ, पूँजी बजारको विकासका लागि संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिने दिने उनको अर्को योजना हो । संस्थागत सुशासनबाट मात्रै कम्पनीहरुको स्वच्छता बढुने र यसले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको लागि सहज हुने उनको ठम्याई छ ।
ढुङ्गानाले समायानुकुल धितोपत्र ऐन नियमलाई सान्दर्भिक बनाउने योजना बनाएका छन् । उल्लेखित प्रतिबद्धता र योजना तत्काल कार्यान्वयनमा गएमा शेयर बजारले विस्तारै लय लिनसक्ने समेत देखिएको छ ।